eNasha.com - तारे जमीन परः हर अभिभावकले बुझ्नुपर्ने कु
तारे जमीन परः हर अभिभावकले बुझ्नुपर्ने कुरा
छोराछोरीले पढेनन्, उनीहरुले अभिभावकको कुरा बुझ्दैनन्, सधैँभरि पढाइमा अब्बल हुन सक्तैनन् भने त्यसको उपचार के हुन सक्छ ? आमिर खानले निर्माण तथा निर्देशन गरेको चलचित्र तारे जमीन परले यो कुरालाई उठाएको छ ।
हरेक व्यक्ति उही हुँदैन, उस्तै हुँदैन । उसको शरीर काम गर्ने तरिका र सोच्ने शैली फरक हुन सक्छ । त्यसैले त हरकोही स्वामी विवेकानन्द हुन सक्तैनन्, ओशो रजनीश हुन सक्तैनन्, बिल गेट्स हुन सक्तैनन् । आखिर सोचेर वा बन्छु भनेर पनि कोही त्यस्तो बन्ने होइनन् । यो त व्यक्तिको आफ्नो सोच, मिहिनेत र उसको वातावरणले दिलाउने कुरा हो ।
बलिउडको सिने परम्परामा आएको नयाँ परिवर्तनको झलक हो, तारे जमीन पर । पछिल्लो समयमा भारत आफैँले महसूस गरिरहेको कुरा सिने पर्दामा झल्किरहेको छ । उसले 'मेट्रो'का पात्रहरु बोकिरहेको छ आफ्नो छातिभरि, 'चक् दे इण्डिया'को कविर खानहरुको लालसा बोकिरहेको छ मनभरि, 'युवा'जस्ता अराजक भीँड लिइरहेको छ काखभरि । तर रोचक के छ भने मनोरञ्जन उद्योगले यी सबै कुरालाई पर्दामा कसरी प्रभावकारी ढङ्गले पस्किने- यो सिकिसकेको छ ।
मनमोहन सिंहको 'साइनिङ इण्डिया'मा 'युवा'हरु अब आश्वस्त भइसके- देशमै भविष्य छ, कतै खोज्न जानु पर्दैन भनेर । त्यसैले त सन् २००५ मा मात्रै २० हजार वैज्ञानिकहरु यूरोप र अमेरिका छाडेर उनीहरु 'स्वदेश' फर्किए । 'स्वदेश'को मोहन भार्गव त ती फर्किएका २० हजार वैज्ञानिकहरुमध्ये एउटा उदाहरण मात्र थियो । मणि रत्नमको 'युवा'ले सिकाएको पाठ पनि त्यही थियो, यदि युवाहरुको अराजक भिड जम्मा भयो भने त्यो देश तहसनहस हुन्छ र मिले भने विकासको मूल फुटाउँछ ।
अब बलिउड अलि 'म्याच्योर' भएको छ । साइनिङ इण्डियामा युवाहरु देश बनाउन कस्सिएपछि पालो बालबालिकाहरुकै आउँछ । तिनलाई दिइने वातावरण र शिक्षाले ठूलो महत्व राख्छ । आमिर खानको 'तारे जमीन पर'ले हर बालक महत्वको छ भनेर देखाएका छन् । तिनका समस्या, तिनको संसार र तिनले बुझेको सत्य- अभिभावक बुझ्न चाहँदैन । अभिभावकलाई त मस्त, तगडा, परीक्षामा सधैँ ९० प्रतिशत कटाउने मेसिन चाहिएको छ । के अब आफ्ना छोराछोरीलाई बुझ्ने बेला भएन र ! सिनेमाले यही कुरा बताउने प्रयास गरेको छ ।
इशान अवस्थीको एकलकाँटेपन, उसको खुशी, उसको समस्यालाई उही समस्याबाट गुज्रिएको अर्को पात्र रामशंकर निकुम्भले मात्र महसूस गर्छ । किनभने उसलाई त्यो चोट थाहा छ, त्यो पीडा र त्यो समस्या थाहा छ । अरु सिनेमा र यो सिनेमामा यही विशेष फरक छ । अरु सिनेमाले उसको हृदयले बुझ्दै नबुझेको, महसूस नै नगरेको पीडा अन्य पात्रहरुसँग 'शेयर' मात्र गर्दैन, तिनको समस्यालाई तु. समाधान गरिदिन्छ । वास्तविकतामा आधारित भएर सिनेमा बनाउनु गाह्रो छ, निर्देशक आमिर खानले त्यो गरेर देखाएका छन् ।
सिनेमामा केही दृश्य छन्, ती दृश्यले मन दुखाएर आँखाबाट रस निकाल्छन् । जब इशानको बाउ बाहिरी संसारसँग प्रतिस्पर्धी बनाउन आफ्नो छोरालाई यी सब कुरा लादिरहेको बताउँछ, जब इशानको बाउ आफ्नी श्रीमतीले छोराको वास्तविक समस्या आमाले इन्टरनेटबाट सोधखोज गरिरहेकी छ वा यस्तै अन्य कुराहरु गर्छ- त्यतिबेला ऊ स्वयंले छोरालाई कहिले पनि माया नगरेको पहिलो पटक महसूस गर्छ । जब जब इशानले एकोहोरो भएर पानीमा हेर्छ, पर क्षितिज नियाल्छ, एकान्तमा घुँक्क घुँक्क गर्दै आफन्तजनलाई सम्झिन्छ- दर्शकलाई यस्तो महसूस हुन्छ, परिवारजनले उसमाथि कति अन्याय गरिरहेका छन् । यी सबै 'इमोशन'लाई पर्दामा सफलतापूर्वक पस्किन सक्नु निर्देशक आमिर खानको सफलता हो ।
हरेक बच्चा वास्तवमै विशेष हुन्छन्, तर तिनलाई अध्ययन गर्न सक्नु पर्छ । तरन आदर्श, भारतीय चलचित्र समीक्षक, लेख्छन्- "म माथि एउटा कृपा गर्नुस्, गएर चलचित्र हेर्नुस् । अनि तपाइँले थाहा पाउनु हुनेछ, वास्तवमै बच्चाहरुलाई कसरी व्यवहार गर्नुपर्ने रहेछ !"
हिजो साँझ मात्र मेरो ठूलो दाइ जय नेपाल हलबाट सिनेमा हेरेर राति फर्कियो । उसले कागजका केही टुक्रा च्यात्यो र कोठामा छरपष्ट पार्‍यो । देख्नेहरुले उसलाई केहीबेर टोके- "किन फोहोर पारेको -" उसको जवाफ थियो- "यो त मलाई पनि थाहा छैन, गएर 'तारे जमीन पर' हेरेर आओ ! त्यसपछि यसभित्रको मनोविज्ञान खोज्ने प्रयत्न गरौला !" के अब आमिरले ठूलाहरुकै बचपनासम्बन्धी सिनेमा बनाउलान् !!
रिलिज हल्ला प्रविधि समारोह अभिनेता सुटिङ सेलेब्रिटी सेक्स पेज थ्री अभिनेत्री